साना राजाहरुको बिगबिगी
ठुला राजा अर्थात राजतन्त्र अन्त्य भएको भएपनि साना तिना राजाहरुले डेरा जन्माउने सम्भावना बढी नै देखिएको छ । सम्भावना पनि प्रबल रुपमै देखापरेको छ । किनभने के माओवादी, के काँग्रेस, अधिकांश दलका नेता कार्यकर्तालाई आफुलाई नव राजाहरुको उत्तराधिकारीका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । मनोविज्ञानमा त्यस्तो देखिएको छ, भन्ने त धेरैअघि प्रष्ट भएको थियो भने अहिले झनै त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ ।
उदाहरणका लागि माओवादी सेनाको सिन्धुलीस्थित दोस्रो डिभिजन शिविरका कमाण्डर सन्तोष राई भरतपुरबाट हतियारसहित पक्राउ परेको विषयलाई लिन सकिन्छ । उनको साथबाट प्रहरीले गि्रनेड र खुकुरी बरामद गरेको छ । चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी कमाण्डर राइले पार्टीको निर्देशन अनुसार आफूले हतियार काठमाण्डौं लैजान लागेको स्वीकार गरेका छन् । पक्राउ परिहाले माओबादी सेनाको डेपुटी कमान्डर पासाङ्कको मान्छे भन्न्ा लगाएको पनि उनले बताएका छन् । शान्ति सम्झौता अनुसार अनुमति विना लडाकुहरु शिबिर बाहिर निस्कन पाउँदैनन भने निस्केपनि हतियार लिएर हिंडन पाउँदैनन् ।
कानुनमा के कुरा छ, कस्ले कानुनअनुसार के गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा त नगरे पनि हुन्छ होला, किनभने कानुनको कुरा कार्यान्वयन नगर्नुमा राजनीतिक पार्टीका मान्छे नै छन् । पहुँच नभएर हुनसक्छ, वा प्रशासनका वास्तविक कर्मचारीका अगाडि परेर हुनसक्छ, सामान्य नागरिक नै कानुनको पालनामा अगाडि छन्, शंकै छैन । जो राजनीतिक पार्टीको पछाडि झण्डा बोकेर हिंड्छ, उसलाई कानुनको पालना गनुृपर्छ भन्ने नै छैन ।
माओवादी लडाकुको घटनामा चितवन जिल्ला अदालतले उनलाई अनुसन्धानका लागि ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । तर पाँच दिन त के, चौबीस घण्टाभित्रै प्रदर्शन र बन्दको धम्की दिएर छुटाउन बेर छैन, । सरकारले भने माओवादीले यही १८ गतेदेखि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गर्न घोषणा गरेलगतै राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । यसलाई केही सह्रानीय काम मान्न सकिन्छ ।
तर सह्रानीय कसरी मान्न सकिन्न भने, सत्तारुढ पार्टीहरु काँग्रेस र एमालेका भातृसंगठनको विवादमा पक्राउ परेका नेविसंघका कार्यकर्ता उपत्यका बन्दको धम्कीपछि छुटाइए । संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, विधिको शासनका बारेमा माओवादी लगायत अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई गाली गर्ने सत्तारुढ दलहरुलाई आफ्ना व्यवहार नसुधारेसम्म कसरी त्यत्रो आँट आयो, भगवान शिवलाई पनि थाहा नभएको कुरा हो । -महेन्द्र । तस्वीरमा, नेविसंघका कार्यकर्ताले प्रदर्शनका क्रममा जलाएको मोटरसाइकल ।
ठुला जति धेरै भ्रष्ट्राचारको काण्डमा
तात्तातो उदाहरण हेर्ने हो भने विद्युतीय पासपोर्ट छपाई प्रकरणमा सुजाता कोइराला मुछिएको कुरा गर्ने कि, राजिनामा दिन बाध्य भएका तमलोपाका शिक्षामन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने रामचन्द्र कुशवाहा । गृहमन्त्री भीम रावलको कुरा गर्ने कि पर्यटनमन्त्री सरदसिंह भण्डारीको कुरा गर्ने वा पुर्वसरकारका पालामा मन्त्री भएकाको त झनै कुरै गर्न परेन ।
यी नाम लिइनुका त्यति धेरै रहस्य लुकेको छैन । बरु रहस्य छ त भ्रष्ट्राचारको कुरामा । कुशवाहाले आफ्ना मान्छेका लागि शिक्षक कोटा वितरण गरेको विवादमा फसे । गृहमन्त्री भीम रावल भने जागिर दिएकोमा भन्दा पनि जागिर नदिएकोमा आफ्नै कार्यकर्ताले आत्मदाह गर्नुपरेको विषयमा मुछिए । त्यसो त प्रहरीमा आफ्ना मान्छे छिराएको आरोपको विषय पछि प्रकाशमा आउला ।
सरदसिंह भण्डारी त विमान किन्ने प्रकरणमा नराम्रोसँग मुछिए । यिनीहरु पावरमा भएकाले त्यति धेरै कुरा बाहिर आउन सकेको छैन, तर गत वर्ष हज यात्रामा भएको अनियमिताका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजु एक महिनाभित्र फछर्यौट गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
एक महिना भित्रमा फछर्याैट नगरे तत्कालिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम र हज कमिटिका अध्यक्षबाट असुल उपर गर्न सरकारलाई सो समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बाध्यता छ । टिकट खरिदबारे संसदमा जानकारी गराएभन्दा प्रति व्यक्ति १ सय ३९ अमेरिकी डलर बढी तिरेको र टिकट खरिद गर्दा बोलपत्र आहृवान नगरेकाले अनियमिता भएको ठहर गरेको छ, सो समितिले । खुबै क्रान्तिकारी भनाउँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीको पनि त्यो हविगत ।
आखिर किन पुग्छन्, दलका ठुला नेताहरु यो अवस्थामा । के दलभित्र अनुशासनको व्यवस्था छैन ? के मन्त्रिपरिषदमा जानु भनेको जे पनि गर्न पाउने अवस्था हो ? पक्कै पनि होइन । आखिर दलहरुले पनि आफ्नो पार्टी सञ्चालन गर्ने विषयमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने पनि त हो । त्यो पनि छैन । त्यही भएर पो हो कि, तल्लोस्तरका भन्दा माथिल्लोस्तरका नै बढी भ्रष्ट्राचारमा डुबेका । -महेन्द्र । तस्वीरमा सिंहदरबार ।
बन्द गरेन कि ड्याम कि ड्याम
क्रिकेटमा धेरै पोख्त भएपछि
नेपाली क्रिकेटमा धेरै प्रगति भएकै हो । यसमा कसैले असहमति जनाउने सक्दैन । त्यही भएर नै नेपाली क्रिकेट फोर डिभिजनमा प्रवेश गरिसकेको छ, फाइभ डिभिजनमा । त्यो मात्रै होइन, विभिन्न उमेरसमुहमा हुने क्रिकेट खेलमा नेपाल एशियामै राम्रो टोलीमा गनिन्छ । नेपाली खेलजगतमा यो राम्रो उदाहरण हो । यसले नेपालको छवि पनि सुधारेको छ ।
कुरा क्रिकेटको होइन, कार्यकर्ता कुटिएको रिस ढुंगाले दिएको प्रसंग हो । एमाले निकट अनेरास्ववियुले आफना कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा सडकमा ओर्लिएको नेविसंघका कार्यकर्ताले काठमाण्डौंको पुतलीसडकमा प्रधानन्यायाधीश चढेको गाडी तोडफोड गरेका छन । प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठलाई सामान्य चोट लागेको छ । प्रदर्शन गरेका समयमा सडक प्रयोग गरेको भन्दै नेविसंघ कार्यकर्ताले श्रेष्ठ चडेको बा १ झ ६३८६ नम्बरको सरकारी गाडी तोडफोड गरेका हुन ।
एक कार्यक्रमबाट फर्किंदै गर्दा उनीहरु एक्कासी आक्रामक भए अनि आक्रमण गरे, त्यो पनि देशकै प्रधानन्यायाधीशलाई । उनीहरुले अर्को सरकारी गाडी पनि तोडफोड गरेका छन । त्रिचन्द्र क्याम्पसमा एमाले अखिलका कार्यकर्ताले आफना कार्यकर्तालाई आक्रमण गरेको र उल्टै प्रहरीले नेविसंघ कार्यकर्ता पक्रेको भन्दै उनीहरुले सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्नु स्वभाविकै हो नि । क्याम्पसमा खुकुरी नचाएर दादागिरी देखाउन त पाइएन सधैभरि । कुनैबेला मन्त्रीको आडमा त्यस्ता दिन थिए होलान् । यो खालको नियम सबै पार्टीका भातृसंगठनमा लागु हुन्छ । के क्रान्तिकारी, के नेविसंघ, अनि अहिले बलियो बनेको अनेरास्ववियुको मामिलामा पनि त्यही हो । आखिर किन यसरी उनीहरुकै भाषामा क्रिकेट खेल्न थालिएको छ, सडकमा ।
क्रिकेटमा पनि ब्याटिङ गर्ने अभ्यास भए त राम्रै हुन्थ्यो । अभ्यास त केवल बलिङ पो छ, त्यसमा पनि इँटाको बलिङ । यो पो गजबको समाचार बनेको छ, समाचार माध्यमका लागि । क्रान्तिकारी, माओवादी कार्यकर्ताले इँटा हिर्काएको, कालोमोसो दलेको भए समाचार कमै बन्थ्यो होला, तर नेविसंघ पनि यसरी उत्रियो । को भन्दा को कम । यही देखाउन खोजिएको त होला नि । त्यतिमात्र हो र, गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा आफना कार्यकर्तामाथि आक्रमण र पक्राउ गरिएको भन्दै नेविसंघले यो सरकारमा बस्नुको औचित्य काँग्रेसका लागि सकिएको बताएको छ । -महेन्द्र । तस्वीरमा, हालै माओवादी र एमाले कार्यकर्ताबीचका झडपमा घाइते एक एमाले कार्यकर्ता ।
तालिम र संविधान नबन्ने बीचमा आशंका
उम्कने प्रयास जारी छ, जब संविधान समयमै बन्ने सम्भावना टर्ने देखिएको छ । त्यही कारण तीन मुख्य दल तीनतिर फर्केका छन् । बरु समाधान अर्थात संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि वा बाँकी समयमै पो संविधान बन्ने हो कि, त्यसतर्फ ध्यानै छैन । यही क्रममा नेपाली काँग्रेसले संविधानसभाको म्याद थप्नु अगाडि प्रमुख राजनीतिक दलले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । दलहरुले अहिलेसम्म के गरियो र अब कहिले के गर्ने भन्ने विस्तृत विवरणसहितको श्वेतपत्र जारी नगर्दासम्म म्याद थपको प्रस्तावमा सहमति गर्न नसकिने कांग्रेसको अडान छ ।
यो अडान आफैंमा सही हो भन्न नसकिएपनि सभासद र दलहरुले केही गर्न नसक्दाको अवस्थामा यसलाई पो सही विकल्प हो कि, भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । काँग्रेसका धेरैजसो सदस्यले म्याद थप गर्ने प्रस्ताव लैजानुपर्ने पक्षमा आफनो धारणा राखेका थिए । यसैगरी माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने भन्दै देशब्यापी रुपमा सैन्य तालिम शुरु गरेर शान्ति प्रकृया विथोल्न लागेको आरोप पनि उसले लगाएको छ । यो त बडो आरोप र प्रत्यारोपको कुरा भयो ।
सरकार पनि कम छैन, संविधान समयमै नबन्ने आशंका भन्दै माओवादीले चलाएको लडाकु तालिमप्रति आपत्ति जनायो । एकीकृत माओवादीले देशव्यापी रुपमा सैन्य तालिम सञ्चालन गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लंघन गरेको ठहर नै गर्‍यो सरकारले । यससम्बन्धमा संवाद भएको देखिन्न बरु, विवादको केन्द्रमा रहेको माओवादीले सत्ताधारी दलबाट आफना कार्यकर्ताहरुमाथि आक्रमण बढेको भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्ने बताएको छ ।
एमाले संविधान नबन्ने भो भन्दै पक्काजस्तै भएकोले विकल्पका लागि । माओवादी सत्ता नपाएसम्म संविधान र शान्ति केही पनि नबन्ने अडानमा । काँग्रेस भने आफ्नै विवाद र आत्मसमीक्षा तर नेतृत्व लिन नसकिरहेको तथा दोधारको स्थितिमा । यो अवस्थामा कसरी जान सक्ने होलान् दलहरु । संविधानसभाको समयसीमापछि नयाँ चुनाव, राष्ट्रपतिय शासनको विषय, जस्ता कुरा पनि छन् । वैधानिकतालाई नाघेर दलहरुले संविधानसभालाई म्याद बढाउने तयारीमा लाग्ने भन्ने आरोप पनि छ ।
यस्ता खालका आशंका र आलोचनालाई साम्य पार्न सक्षम छन् भने दलहरु खै किन यसरी असहमतिका बीचमा हिँडिरहेका छन् । सहमति गर्न सकिन्छ, संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने दलहरुले अहिले नै देखाउन सक्नुपर्छ कि, संविधान बनाएर वा संविधान निर्माण हुने स्पष्ट आधार तय गरेर, तर खै तालिम, सैन्य भर्ना, आरोप प्रत्यारोप बाहेक केही छैन । त्यसैले, काम गर्न नसकेको सही समीक्षा अनि काम गर्ने संकल्प पो अहिलेको आवश्यकता हो कि । - महेन्द्र । तस्वीरमा, उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागी नेताहरु ।
April 20, 2010 5:37 am
सुडानबारे नेपालबाट देश विदेशमा प्रचार हुने पक्का
अब त राजिनामा देलान् कि
April 17, 2010 6:29 am
पैसा दिने विषयमा कुरो नमिल्ला र
कुनै बेला के माओवादी के सत्ता साझेदार एमाले र काँग्रेसका नेताहरु, भन्ने गर्थे कि, प्राविधिक कुरा त मिलिहाल्छन् नि । संख्याका विषयमा आनाकानी भएपनि पैसा दिने वा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मिलिहाल्छ नि भन्ने हुन्थ्यो । अहिले आएर भने दलका नेताहरुबीच कुनै दोहोरी छ भने त्यो लडाकुलाई कति रकम दिने भन्ने नै हो । सेना समायोजन विशेष समितिको एउटा बैठक बस्छ, निर्णय गर्छ, त्यसलाई मान्ने भन्नु चाहिं परै जाओस् आलोचना पो हुन्छ ।
यतिसम्म कि, त्यही रिसको झोंकमा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस र एमाले संविधानसभा विघटनको तयारीमा रहेको आरोप लगाउन भ्याए । तीन हजार लडाकुलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने र साढे दुई लाख दिने सरकारी प्रस्तावमा माओवादी सहमत हुन नसक्ने उनको भनाई छ । यो त नारायणकाजीको भनाई मात्र आएको होइन । माओवादीका कुनैपनि नेताले अघिका कुरा अहिले आएर ठीक छ भन्न सकेको अवस्था पनि छैन ।
विशेष समितिको बैठकमा उपस्थित भएका भए कस्तो वार्ता हुन्थ्यो होला । 'सेना समायोजन नभईकन शान्ति र संविधान बन्न सम्भव छैन ।' प्रधानमन्त्री नेपालले भने । सो प्रस्ताव कुनै नौलो लागेन माओवादीका नेतालाई । सोधिहाले, 'त्यसो भए सेना समायोजन विशेष समितिको संयोजक भएको हैसियतले तपाईले के उपाय निकाल्नुभएको छ त ।' 'उपाय बडो सरल छ, सेना समायोजन हुन्छ ।' प्रधानमन्त्रीले भने ।
हुन्छ भन्ने कुरा त शान्ति सम्झौतामै थियो, तर नयाँ के छ कसरी हुन्छ, त्यो पो चाहियो भन्ने माओवादी नेताहरुको भनाई आयो । 'माओवादीका ३ हजार लडाकु समायोजन हुन्छन् र साढे दुई लाखसम्म पैसा पनि दिइन्छ ।' बैठकमा उपस्थित माओवादी प्रतिनिधिलाई सो कुरा मान्य नभएको जानकारी तत्कालै दिइहाले । भने, '१० वर्ष जनयुद्ध लडेका सेनालाई बेवास्ता गर्ने आँट कसरी आयो, लडाकुको संख्या वास्तविक धेरै छ, बाँकी रहेकालाई अलपत्र पार्न मिल्दैन ।'
माओवादी नेताले थपे, 'हामीले सुरुमा ३२ हजार लडाकुको कुरा उठाएका थियौं, प्रमाणीकरण गर्दा १९ हजारमा आइपुगे, अहिले आएर त्यस कुरालाई कसरी बिर्सन सकिन्छ ?' सत्तारुढ दलका नेता पनि के कम, उनीहरुले पनि दिइहाले, 'शक्तिखोर भिडियो काण्डमा सात हजार लडाकु भएको कुरा खुलासा भएकै हो नि ।' माओवादी नेताले उत्तर दिए, 'खुलासा भएको हो भने किन सात हजारको सट्टा तीन हजारको कुरा गर्ने त ?' बैठकमा सहभागी सत्तारुढ दलका नेताले भने, 'त्यो त भिडियो खुलासा भयो, तर शीर्ष नेताहरुबीच त तीन हजारकै कुरा भएको रहेछ नि ।' भित्र भित्र भएका कुरा खुलासा भएको सुनेर माओवादी नेताहरु निकै रिसाए । समितिका सदस्यहरु सहमति हुन्छ त भन्छन् तर सहमति हुने कहिले हो निश्चित छैन । तस्वीरमा, राष्ट्रिय सेना ।
जता जाँदा उस्तै भटटटट पाइने
संविधान निर्माणमा २०६६ लाई फर्केर हेर्दा